रुकुम घटना ! बेपत्ता अर्का युवाको श'व पनि भेटियो, शरीरमा चोट - सुदुर नेपाल
रुकुम घटना ! बेपत्ता अर्का युवाको श’व पनि भेटियो, शरीरमा चोट
काठमाडौँ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८ मा गत जेठ १० गते भएको घ टनामा बेपत्ता जाजरकोटका थप एक युवकको श व भेटिएको छ ।
भेरी नगरपालिका–१२ खोदाखोला नजिकै नदी किनारमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख किशोर श्रेष्ठले बताएका हुन् ।
घटनाको दश दिनपछि गोविन्दको शव भेटिएको हो । उक्त घटनामा परेका पाँच जना युवकको शव यसअघि नै भेटिइसकेको छ । भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नबराज विक, १९ वर्षीय गणेश बुढामगर, २३ वर्षीय सञ्जु बिक, भेरी नगरपालिका–११ का १९ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार र चौरजहारी नगरपालिका–१ का २० वर्षीय टीकाराम सुनारको शव यसअघि भेटिएको थियो ।उनीहरूको पोष्टमार्टम भएर पनि दाह संस्कार गरिसकिएको छ।
मुचुल्कास्थलमै रहेका एक प्रहरी, भेरी नगरपालिका–४ का वडा सदस्य भद्रबहादुर शाही र सोती घटना संघर्ष समितिका संयोजक नगेन्द्र शाहले हात भाँचिएको र अनुहार तथा शरीरमा चोट लागेको अवस्थामा शव भेटिएको बताए ।तर, डीएसपी श्रेष्ठले भने हात भाँचिएको र अनुहार तथा शरीरमा चोट लागेको विषयमा पुष्टि गरेनन् । मुचुल्का गर्न गएको टोली आइपुगेको छैन । अनुहार र शरीरमा चोटपटक देखिएको छ भन्छ हात त्यसविषयमा (हात भाँ’चिएको,आँखा फुटेको) केही जानकारी छैन ।
मुचुल्कास्थलमा रहेका अर्का एक प्रहरीले मुचुल्का गर्दा भाँचिएको भनेर किटान गर्न नमिल्ने बताए । आफूहरूले चोटपटक र शरीरका कुनै अंग (हातखुट्टा, घाँटी) लुलो देखेमा सोही अनुसार मुचुल्का प्रतिवेदन बनाउने उनले बताए । बाँकी पोष्टमार्टम रिपोर्टले बताउने उनको भनाइ छ । आज भेटिएको गोविन्दको श व पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल, जाजरकोटमा लगिने छ ।
Previous Post: संक्रमित भेटिएपछि भान्से आएनन! क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु भोक्कै
Next Post: रुकुम घ’टनाको छानबिन प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रहोस् : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल